Taylor Swift နဲ့ Katy Perry တို့ကြားက ရန်ငြိုးရန်စတွေရဲ့ အစနဲ့အဆုံး
16 May 2018 . 5:56 PM
Taylor Swift နဲ့ Katy Perry ဆိုတာ က ဂီတလောကမှာ အအောင်မြင်ဆုံး အဆိုတော်တွေဖြစ်သလို နှစ်ကာလကြာ အငြိုးအတေးအစိုင်အခဲတွေနဲ့ ရန်ငြိုးရန်စတွေ၊ Social Media တွေပေါ်မှာ အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြား နာမည်အကြီးဆုံး ရန်ဘက် ၂ ဦးလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်။
Katy Perry and Taylor Swift funny moment
တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အရမ်းခင်မင်နေကြတဲ့ ဆက်ဆံရေးကနေ ၂ဦး၂ဖက် Tour တွေအသီးသီးလုပ်ရင်းမှ ဖြစ်တဲ့ပြသာနာတွေကြောင့် မခေါ်မပြောဘဲနဲ့ Social War တွေဖြစ်ကြ၊ ဂီတလောကတစ်ခုလုံး လူစုတွေကွဲပြီး ပွက်လောရိုက်ခဲ့ကြတာ နှစ်ကာလအတော်ကြာကြာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Katy Tour Vs Taylor Tour
ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်ကပဲ Taylor ထံကို Katy ရဲ့ သံလွင်ခက်လေးနဲ့အမှာပါးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချွန်လွှာလေး ရောက်ရှိလာပြီးနောက်မှာတော့ သူတို့ ၂ ဦးကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ပြန်လည်နွေးထွေးလာတော့မယ့်အရိပ်အယောင်တွေ ပြလာတာမို့ ၂ဦး ၂ဖက် Fan တွေကတော့ ဝမ်းသာနေကြပါပြီ။
Taylor နဲ့ Katy တို့ရဲ့ Die Hard Fan တွေအတွက်တော့ ဒီရန်ငြိုးရန်စအကြောင်းကို ရင်းနှီးနေပြီးသား သိနေပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် သူတို့ ၂ယောက်ကြားက ပြသာနာတွေရန်စတွေနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Taylor and Katy at 2018 Music Video Awards
2008 ခုနှစ် MTV Music Awards ပွဲမှာတည်းက စတင်ပြီး ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့ Taylor နဲ့ Katy ဟာ ဓါတ်ပုံတွေရိုက် အပြန်အလှန်စနောက်ပြီး Twitter ပေါ်မှာပါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သဘောကျချစ်ခင်တဲ့စာလွှာလေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန် Tweet ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခင်မင်မှုသံယောဇဉ်ဟာ ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး သူတို့၂ဦးကြား ခိုင်မာခဲ့ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေပို့ရင်း၊ တစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းကို တစ်ယောက်က ထောက်ခံအားပေးရင်း ပိုတည်မြဲစေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦးကြားပထမဆုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အရာက Taylor နဲ့ စတင် ဇာတ်လမ်းရှိခဲ့တဲ့ John Mayer ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ John နဲ့ Taylor ပြတ်စဲခဲ့ပြီးနောက် “Dear John” ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် Taylor ဆီကထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာတော့ John နဲ့ Katy နဲ့ ဇာတ်လမ်းစတင်ခဲ့ပြီး ခနတာပဲကြာမြင့်မယ်ထင်ကြတဲ့ Relationship တစ်ခုဟာ အချိန်တော်တော်ကြာတည်မြဲခဲ့ပါတယ်။
John Mayer, Katy Perry and Taylor Swift
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတော့ သူတို့ရန်ငြိုးတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး အစပါပဲ။ Top Star ၂ ယောက်လုံး Music Tour တွေနဲ့ အပြိုင် အလုပ်တွေရှုပ်နေချိန် Taylor က Katy ရဲ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ California Dreams Tour မှာ တုန်းက တွဲဖက်ဖျော်ဖြေဖူးခဲ့တဲ့ အကသမား ၃ ဦးကို သူမရဲ့ Red Tour မှာ ဖျော်ဖြေဖို့ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ ၃ဦးလုံးကလည်း လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
Taylor ရဲ့ Red Tour မှာ ဖျော်ဖြေနေရင်းမှာပဲ Katy ရဲ့ Prism Tour အတွက်ဖျော်ဖြေဖို့ ထပ်မံကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာမို့ အကသမားတွေဟာ သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ မိသားစုပိုဆန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ Katy နဲ့ တူတူဖျော်ဖြေဖို့ Taylor ရဲ့ Red Tour တဝက်တပျက်မှာပဲ Katy ဆီ ပြောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့လိုရန်စတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Rolling Stone Magazine Interview မှာတော့ Taylor က “Bad Blood” သီချင်းဟာ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ကို ရည်ညွှန်းလားဆိုတဲ့အမေးကိုတော့ “နှစ်တွေအကြာကြီး ရင်းနှီးခဲ့တာတောင် သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်ခံရခက်ခက်ပါပဲ။ ကျွန်မနဲ့တွေ့ပြီး ခင်မင်ခဲ့တယ် ပြီးတော့ ကျွန်မဘဝထဲက ထွက်သွားပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေအများကြီးပေးခဲ့တာ သူငယ်ချင်းမှဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးရမလိုပါပဲ” လို့ဖြေခဲ့ပြီး နောက်ရက်မှာပဲ Katy က “သိုးမွှေးဝတ်ရုံအောက်က Regina George ကို စောင့်ကြည့်လိုက်” ဆိုပြီး Mean Girls ရုပ်ရှင်ကားထဲက Character နဲ့ စောင်းမြောင်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လို အပြန်အလှန်စောင်းမြောင်းတင်ရင်း၊ သီချင်းတွေဖန်တီးရင်း Nicki Minaj ကပါ သူမရဲ့ Music Video ဆုမရဘဲ Taylor ရဲ့ Music Video ဆုရတာကို မကျေနပ်ချက်နဲ့ ရွဲ့စောင်းတင်ရင်း ပြသာနာတွေပိုကြီးလာပါတယ်။
2016 မှာတော့ Katy က Taylor နဲ့ပြန်အဆင်ပြေပြေနေလာတာတွေ့ရပါတယ်။ သီးသန့် အကြို Grammy Party ပွဲမှာ Katy က Taylor ကို A အဆင့် ဧည့်သည်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Taylor နဲ့အကြာကြီးတွဲပြီး ခွာပြဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူ Calvin Haris ဟာလည်း သူ့အကြောင်းကို Taylor က Rihanna ရဲ့ သီချင်းထဲမှာ ထည့်အသုံးပြုခဲ့တာမို့ Twitter ပေါ်မှာ မင်း သီးချင်းသစ်လိုနေတဲ့အချိန်မှာ ငါ့ကိုတော့ Katy ကိုလုပ်သလို မီးမွှေးပြီး သီချင်းသစ်ဖန်တီးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ငါလက်မခံဘူး” လို့ ရေးသားပြီး ပြန်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ Katy ကလည်း Hillary Clinton ရဲ့ အံ့သြတကြီးဖြစ်တဲ့ Video ပုံလေးနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Taylor Swift ရဲ့ Bad Blood MTV အပြီးမှာပဲ မေလ ၉ ရက် ၂၀၁၇ မှာ Katy က Nicki Minaj Featuring ဆိုပေးထားတဲ့ Swish Swish သီချင်း ကို ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့သီချင်းဟာလည်း Taylor ကို စောင်းမြောင်းတဲ့ သီချင်းဆိုပြီး ၂ ဖက်ပရိသတ်တွေပါ အပြန်အလှန် ရန်စပိုကြီးခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီး Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Carpool Karaoke မှာလည်း Katy က ဒါတွေအကုန်လုံးက သူမ(Taylor) စခဲ့တာပါ။ ဒီအချိန်မှာတော့ သူမအားလုံးအဆုံးသတ်သင့်ပါပြီ” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Taylor and Katy old memories
အဲ့လို Katy နဲ့ ရန်ငြိုးတွေ၊ Kayne တို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်စတွေ၊ မထင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ အပေါ်ယံခင်မင်မှုတွေကြားမှာ Taylor ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်တော့ဘဲ အချိန်အတော်ကြာ လူမှုကွန်ယက်တွေအားလုံးကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ကို စွပ်စွဲခဲ့ကြတဲ့ မြွေမဆိုတဲ့ အသွင်ကိုလုံးဝယူခဲ့ပြီး အအောင်မြင်ဆုံး Reputation Tour နဲ့ Billboard ရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Taylor ကြောင့် အားလုံးအံ့သြခဲ့ကြသလို ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Katy ကိုယ်တိုင်ကပါ ပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းမှုရယူချင်လာတဲ့အတွက် ချစ်ကြည်ရေးသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ သံလွင်ခက်လေးနဲ့ “အရင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေအားလုံးကို ရှင်းလင်းလိုက်ကြရအောင် ငါ့သူငယ်ချင်းဟောင်းလေးရေ” ဆိုပြီး စာလွှာပါးခဲ့ပါတယ်။ Taylor ဟာ Katy ရဲ့ အရင်က ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့တာတွေကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ပေမယ့် ဒီတခါတော့ Instagram Story မှာတင်ပြီး Thank You Katy လို့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Taylor and Katy at Grammu Music Awards
နှစ်ကာလအတော်ကြာကြာ ၂ဖွဲ့ကွဲနေခဲ့တဲ့ Taylor နဲ့ Katy ရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီလိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုအတွက် ဝမ်းသာနေကြပါပြီ။ အနုပညာလောကရဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေထဲမှာတော့ Katy နဲ့ Taylor က နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်သလို ရန်ငြိုးရန်စလည်း အကြီးမားဆုံးသူတွေမို့ ဒီတစ်ခါတော့ ၂ ယောက်သားအရင်လို နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပြီလားဆိုတာ မျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။
Taylor Swift နဲ့ Katy Perry တို့ကွားက ရနျငွိုးရနျစတှရေဲ့ အစနဲ့အဆုံး
Taylor Swift နဲ့ Katy Perry ဆိုတာ က ဂီတလောကမှာ အအောငျမွငျဆုံး အဆိုတျောတှဖွေဈသလို နှဈကာလကွာ အငွိုးအတေးအစိုငျအခဲတှနေဲ့ ရနျငွိုးရနျစတှေ၊ Social Media တှပေျေါမှာ အပွနျအလှနျ တိုကျခိုကျမှုတှကွေား နာမညျအကွီးဆုံး ရနျဘကျ ၂ ဦးလညျး ဖွဈပါသေးတယျ။
တဈဦးနဲ့ တဈဦး အရမျးခငျမငျနကွေတဲ့ ဆကျဆံရေးကနေ ၂ဦး၂ဖကျ Tour တှအေသီးသီးလုပျရငျးမှ ဖွဈတဲ့ပွသာနာတှကွေောငျ့ မချေါမပွောဘဲနဲ့ Social War တှဖွေဈကွ၊ ဂီတလောကတဈခုလုံး လူစုတှကှေဲပွီး ပှကျလောရိုကျခဲ့ကွတာ နှဈကာလအတျောကွာကွာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မကွာသေးခငျကပဲ Taylor ထံကို Katy ရဲ့ သံလှငျခကျလေးနဲ့အမှာပါးလိုကျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး စာခြှနျလှာလေး ရောကျရှိလာပွီးနောကျမှာတော့ သူတို့ ၂ ဦးကွားက ဆကျဆံရေးဟာ ပွနျလညျနှေးထှေးလာတော့မယျ့အရိပျအယောငျတှေ ပွလာတာမို့ ၂ဦး ၂ဖကျ Fan တှကေတော့ ဝမျးသာနကွေပါပွီ။
Taylor နဲ့ Katy တို့ရဲ့ Die Hard Fan တှအေတှကျတော့ ဒီရနျငွိုးရနျစအကွောငျးကို ရငျးနှီးနပွေီးသား သိနပွေီးသားဖွဈပမေယျ့ မသိသေးတဲ့ သူတှအေတှကျ သူတို့ ၂ယောကျကွားက ပွသာနာတှရေနျစတှနေဲ့ ဒီဇာတျလမျးတဈခုလုံးကို တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
2008 ခုနှဈ MTV Music Awards ပှဲမှာတညျးက စတငျပွီး ခငျမငျခဲ့ကွတဲ့ Taylor နဲ့ Katy ဟာ ဓါတျပုံတှရေိုကျ အပွနျအလှနျစနောကျပွီး Twitter ပျေါမှာပါ တဈယောကျကိုတဈယောကျ သဘောကခြဈြခငျတဲ့စာလှာလေးတှနေဲ့ အပွနျအလှနျ Tweet ခဲ့ပါတယျ။ ဒီခငျမငျမှုသံယောဇဉျဟာ ၂၀၀၉ ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှဈတဈလြှောကျလုံး သူတို့၂ဦးကွား ခိုငျမာခဲ့ပွီး မှေးနဆေု့တောငျးတှပေို့ရငျး၊ တဈယောကျရဲ့ သီခငျြးကို တဈယောကျက ထောကျခံအားပေးရငျး ပိုတညျမွဲစခေဲ့ပါတယျ။
သူတို့ ၂ ဦးကွားပထမဆုံးဝငျရောကျလာခဲ့တဲ့ အရာက Taylor နဲ့ စတငျ ဇာတျလမျးရှိခဲ့တဲ့ John Mayer ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၀ မှာ John နဲ့ Taylor ပွတျစဲခဲ့ပွီးနောကျ “Dear John” ဆိုတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျ Taylor ဆီကထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၂ မှာတော့ John နဲ့ Katy နဲ့ ဇာတျလမျးစတငျခဲ့ပွီး ခနတာပဲကွာမွငျ့မယျထငျကွတဲ့ Relationship တဈခုဟာ အခြိနျတျောတျောကွာတညျမွဲခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈကတော့ သူတို့ရနျငွိုးတှရေဲ့ အကွီးမားဆုံး အစပါပဲ။ Top Star ၂ ယောကျလုံး Music Tour တှနေဲ့ အပွိုငျ အလုပျတှရှေုပျနခြေိနျ Taylor က Katy ရဲ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ California Dreams Tour မှာ တုနျးက တှဲဖကျဖြျောဖွဖေူးခဲ့တဲ့ အကသမား ၃ ဦးကို သူမရဲ့ Red Tour မှာ ဖြျောဖွဖေို့ငှားရမျးခဲ့ပါတယျ။ ၃ဦးလုံးကလညျး လကျခံခဲ့ပါတယျ။
Taylor ရဲ့ Red Tour မှာ ဖြျောဖွနေရေငျးမှာပဲ Katy ရဲ့ Prism Tour အတှကျဖြျောဖွဖေို့ ထပျမံကမျးလှမျးခံခဲ့ရတာမို့ အကသမားတှဟော သူတို့နဲ့အလုပျလုပျရတာ မိသားစုပိုဆနျတယျလို့ခံစားရတဲ့ Katy နဲ့ တူတူဖြျောဖွဖေို့ Taylor ရဲ့ Red Tour တဝကျတပကျြမှာပဲ Katy ဆီ ပွောငျးဖြျောဖွခေဲ့ကွပါတယျ။
အဲ့လိုရနျစတှဖွေဈခဲ့ပွီး ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ Rolling Stone Magazine Interview မှာတော့ Taylor က “Bad Blood” သီခငျြးဟာ နာမညျကွီးအဆိုတျောတဈယောကျကို ရညျညှနျးလားဆိုတဲ့အမေးကိုတော့ “နှဈတှအေကွာကွီး ရငျးနှီးခဲ့တာတောငျ သူငယျခငျြးအဖွဈ လကျခံရခကျခကျပါပဲ။ ကြှနျမနဲ့တှပွေီ့း ခငျမငျခဲ့တယျ ပွီးတော့ ကြှနျမဘဝထဲက ထှကျသှားပွီး စိတျအနှောငျ့အယှကျတှအေမြားကွီးပေးခဲ့တာ သူငယျခငျြးမှဟုတျရဲ့လားလို့ မေးရမလိုပါပဲ” လို့ဖွခေဲ့ပွီး နောကျရကျမှာပဲ Katy က “သိုးမှေးဝတျရုံအောကျက Regina George ကို စောငျ့ကွညျ့လိုကျ” ဆိုပွီး Mean Girls ရုပျရှငျကားထဲက Character နဲ့ စောငျးမွောငျးတငျခဲ့ပါတယျ။
အဲ့လို အပွနျအလှနျစောငျးမွောငျးတငျရငျး၊ သီခငျြးတှဖေနျတီးရငျး Nicki Minaj ကပါ သူမရဲ့ Music Video ဆုမရဘဲ Taylor ရဲ့ Music Video ဆုရတာကို မကနြေပျခကျြနဲ့ ရှဲ့စောငျးတငျရငျး ပွသာနာတှပေိုကွီးလာပါတယျ။
2016 မှာတော့ Katy က Taylor နဲ့ပွနျအဆငျပွပွေနေလောတာတှရေ့ပါတယျ။ သီးသနျ့ အကွို Grammy Party ပှဲမှာ Katy က Taylor ကို A အဆငျ့ ဧညျ့သညျအဖွဈ သတျမှတျဖိတျကွားခဲ့ပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ Taylor နဲ့အကွာကွီးတှဲပွီး ခှာပွဲခဲ့တဲ့ ခဈြသူ Calvin Haris ဟာလညျး သူ့အကွောငျးကို Taylor က Rihanna ရဲ့ သီခငျြးထဲမှာ ထညျ့အသုံးပွုခဲ့တာမို့ Twitter ပျေါမှာ မငျး သီးခငျြးသဈလိုနတေဲ့အခြိနျမှာ ငါ့ကိုတော့ Katy ကိုလုပျသလို မီးမှေးပွီး သီခငျြးသဈဖနျတီးဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ ငါလကျမခံဘူး” လို့ ရေးသားပွီး ပွနျဖကျြခဲ့ပါတယျ။ Katy ကလညျး Hillary Clinton ရဲ့ အံ့သွတကွီးဖွဈတဲ့ Video ပုံလေးနဲ့ပွနျတုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
Taylor Swift ရဲ့ Bad Blood MTV အပွီးမှာပဲ မလေ ၉ ရကျ ၂၀၁၇ မှာ Katy က Nicki Minaj Featuring ဆိုပေးထားတဲ့ Swish Swish သီခငျြး ကို ဖွနျ့ဝခေဲ့ပါတယျ။ အဲ့သီခငျြးဟာလညျး Taylor ကို စောငျးမွောငျးတဲ့ သီခငျြးဆိုပွီး ၂ ဖကျပရိသတျတှပေါ အပွနျအလှနျ ရနျစပိုကွီးခဲ့ပါတယျ။
နာမညျကွီး Program တဈခုဖွဈတဲ့ Carpool Karaoke မှာလညျး Katy က ဒါတှအေကုနျလုံးက သူမ(Taylor) စခဲ့တာပါ။ ဒီအခြိနျမှာတော့ သူမအားလုံးအဆုံးသတျသငျ့ပါပွီ” လို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
အဲ့လို Katy နဲ့ ရနျငွိုးတှေ၊ Kayne တို့နဲ့ဖွဈခဲ့တဲ့ ရနျစတှေ၊ မထငျထားတဲ့သူတှရေဲ့ အပျေါယံခငျမငျမှုတှကွေားမှာ Taylor ဟာ ဘယျသူ့ကိုမှ မယုံကွညျတော့ဘဲ အခြိနျအတျောကွာ လူမှုကှနျယကျတှအေားလုံးကို ဖွတျတောကျခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးတော့ သူ့ကို စှပျစှဲခဲ့ကွတဲ့ မွှမေဆိုတဲ့ အသှငျကိုလုံးဝယူခဲ့ပွီး အအောငျမွငျဆုံး Reputation Tour နဲ့ Billboard ရဲ့ နံပါတျတဈနရောတှကေို သိမျးပိုကျခဲ့ပါတယျ။
ပွောငျးလဲသှားတဲ့ Taylor ကွောငျ့ အားလုံးအံ့သွခဲ့ကွသလို ခုနောကျဆုံးမှာတော့ Katy ကိုယျတိုငျကပါ ပွနျလညျငွိမျးခမျြးမှုရယူခငျြလာတဲ့အတှကျ ခဈြကွညျရေးသင်ျကတေဖွဈတဲ့ သံလှငျခကျလေးနဲ့ “အရငျက ဖွဈခဲ့တဲ့ အခွအေနတှေအေားလုံးကို ရှငျးလငျးလိုကျကွရအောငျ ငါ့သူငယျခငျြးဟောငျးလေးရေ” ဆိုပွီး စာလှာပါးခဲ့ပါတယျ။ Taylor ဟာ Katy ရဲ့ အရငျက ပွနျလညျဆကျသှယျခဲ့တာတှကေို ဂရုမစိုကျခဲ့ပမေယျ့ ဒီတခါတော့ Instagram Story မှာတငျပွီး Thank You Katy လို့ အသိအမှတျပွုခဲ့ပါတယျ။
နှဈကာလအတျောကွာကွာ ၂ဖှဲ့ကှဲနခေဲ့တဲ့ Taylor နဲ့ Katy ရဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ဒီလိုပွနျလညျပေါငျးစညျးမှုအတှကျ ဝမျးသာနကွေပါပွီ။ အနုပညာလောကရဲ့ အရှုပျအထှေးတှထေဲမှာတော့ Katy နဲ့ Taylor က နာမညျအကွီးဆုံးဖွဈသလို ရနျငွိုးရနျစလညျး အကွီးမားဆုံးသူတှမေို့ ဒီတဈခါတော့ ၂ ယောကျသားအရငျလို နှေးထှေးတဲ့ဆကျဆံရေးကို ပွနျလညျထူထောငျနိုငျပွီလားဆိုတာ မြှျောလငျ့ရတော့မှာပါ။
by Kyaw Soe Aung . 8 hours ago
အတွေးလွန်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘာတွေသိထားဖို့လိုမလဲ
by Kyaw Soe Aung .9hours ago
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Prank တွေနဲ့ Challenge တွေကို ဖယ်ရှားသွားတော့မယ့် YouTube
by yoelu . 10 hours ago